Amandla High LED-Flood Khanyisa Abakhiqizi - Football Stadium Lights
LED Stadium Ukukhanyisa Abakhiqizi | Football Stadium Lights, Street Lights, Elikhulu Area Lights, Isikhumulo sezindiza & iphinifa Lighting, Indawo yokupaka izimoto Lights, RGB Wall imshini Lights | TACHYON Lights
LED Stadium Ukukhanyisa Abakhiqizi | Football Stadium Lights, Street Lights, Elikhulu Area Lights, Isikhumulo sezindiza & iphinifa Lighting, Indawo yokupaka izimoto Lights, RGB Wall imshini Lights
TACHYON kuyinto ezintsha High Power LED Lighting Umkhiqizi kusukela 2005. Sinazo ubuchwepheshe cutting edge njengoba sikubheke kakhulu R&D ithimba by imali kakhulu ekuthuthukiseni izinga yokukhanya & ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo. Onjiniyela bethu kuyoyixazulula izinkinga zakho lobuchwepheshe & ukukunikeza professional DIALux sekulingisa imibiko. Ukuqamba Inspiring & Ukuphelela Ukuphikelela ekusebenziseni Ukukhanyisa Ukusebenza kukhona izimiso zethu eziwumongo kanye… (Funda kabanzi)
ubuchwepheshe – Umkhiqizo Overview of Lights yethu Amandla High LED
Ezemidlalo & Stadium Lighting
TACHYON eba ultra ukwenzela ukungena okuncane kakhulu, ukukhanya isisindo & amandla okusezingeni eliphezulu LED ezemidlalo ukukhanya Stadium & Arena, okuyinto ugweme abizayo ukuqinisa izindleko izigxobo. Zethu Premium Ukukhanyisa Solutions ukufeza 4K Broadcasting imfuneko kanye. Ngaphezu kwalokho, TACHYON okukhethekile ukuphathwa ezishisayo sithuthukisa ukusebenza & sokuphila izibani kuze kufinyelele 80,000 amahora; ukuze ukwazi ukuthola eliqinile le LED ezemidlalo ukukhanya… (Funda kabanzi)
TACHYON Premium yokukhanya & Asymmetric lens Technology ngoba amandla okusezingeni eliphezulu emgwaqweni LED ukukhanya isiqinisekiso Ukukhanyisa oluvelele Ukufana. TACHYON ukukhanya emgwaqweni uyazigcwalisa IP66 / IP68 imfuneko ukuthi akakubekezeleli isimo sezulu ezivamile enqabayo. Nge yayo izinga okusezingeni Aluminium Ingxubevange igobolondo, nokugqwala ingavinjelwa ngisho izibani zethu efakwe eduze Isifunda esingasogwini noma kwemboni… (Funda kabanzi)
Kukhona isicelo ezingenakubalwa LED High Bay Khanyisa & High Mast Flood Lighting, ezifana e-Warehouse ka, Isikhumulo sezindiza, Indawo yokupaka izimoto, Indoor Sports Field, Port, ukwakhiwa Site, Rail Yard, futhi uhlobo enjalo Izindawo ezinkulu. Ungakwazi ukujabulela super elikhanyayo & yokucacisa umfaniswano, futhi yehlise amandla ukusetshenziswa ngokukhetha High yethu Amandla LED Floodlight. TACHYON ubeka imizamo okuningi ku ukushabalalisa ukushisa design. Zethu amasu super-ukupholisa okwengeziwe kwelula isikhathi sokuphila ukuba 80,000 amahora angu-L70… (Funda kabanzi)
Imibala bahlobise ukuphila kwakho. Isicelo kwamandla okusezingeni eliphezulu LED Wall imshini kuhlanganisa Isakhiwo olungaphambili lwesonto & Ukuhlobisa ukukhanya, yangaphandle Khanyisa, wokukhanya kokwakheka kwezwe, Isiteji Khanyisa & Khulisa ukukhanya. TACHYON Ukukhanya kwe-RGB & Wall imshini luhambisana kokubili Static & Dynamic umbala ukushintsha, futhi ngaleyo ndlela kufanelekile simo okudinga eziyinkimbinkimbi ukukhanyisa umphumela… (Funda kabanzi)